- လှုံ့ဆော်တိုက်တွန်းတတ်တဲ့ စေတသိက်ကို စောင့်ကြည့်သိမှတ်မှုမှာ အမြဲရှိနေအောင် မိမိကိုယ်တိုင် အသိနဲ့သတိကို အဆက်မပြတ် သတိပေးနှိုးဆော်ပြီး သိမှတ်နေရမယ်။
- သိစရာရှိတာတွေထဲက သိသင့်တာအကုန်လုံးကို သိလို့ရသလောက် စာမျိုးစုံဖတ်ပြီး မိမိရရရှာဖွေ။ သိအောင်ပြောနိုင်တဲ့ ပညာရှိကို မေးလို့ရသလောက် မေးပြီး မိမိရရရှာဖွေ။ ဖတ်လို့ရသမျှ၊ နားထောင်လို့ကြားသမျှအပေါ်မှာ အခြေခံပြီး ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ အသိဖြစ်အောင် မိမိရရ အားထုတ်ရင် မိမိရရသိတဲ့ စိတ်အသိဖြစ်ပြီ။
- မိခင်ဘက်က ရိုးရာ၊ ဖခင်ဘက်က အစဉ်အလာအတိုင်း၊ မိဘဘိုးဘွား အစဉ်အဆက် လက်ခံကျင့်သုံးခဲ့တဲ့ စိတ်အယူအဆ။
- လူဖြစ်ခွင့်ရတုန်း ဘ၀ပြတ်ကြောင်းတရားကို ဖြစ်မြောက်အောင် အားထုတ်မယ်ဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချ။ ရှာဖွေ သိရှိထားသမျှ အသိဉာဏ်အကုန်လုံး အစီအစဉ်ဆွဲ ဇယားချ။ သိမှတ်ပေးရမယ့် စိတ်အဆင့်ဆင့်ကို စနစ်တကျ သိမှတ်။ ကျင့်စဉ်တစ်ခုလုံးရဲ့ အဆုံးထိ သိပေးနေတဲ့ အချိန်မှာ သိမှတ်မှုက အဆက်မပြတ် ဖြစ်နေရမယ်။ ကြားဖြတ်စိတ် မ၀င်နိုင်အောင် သိမှတ်မှု ဆက်တိုက်ဖြစ်နေရမယ်။ အာရုံရဲ့ ထိတွေ့မှုကို သိပြီး သိသိချင်း ဖြတ်တောက်နေမှုဟာ တရစပ် ဖြစ်နေရမယ်။ ခံစားစိတ် ဖြစ်ခွင့်မရတာ သေချာနေရမယ်။ သိမှတ်နေတဲ့ အာရုံ၊ အာရုံကို သိနေတဲ့ အသိ။ နှစ်ခုလုံးရဲ့ ဆက်တိုက်ချုပ်ပျောက်မှုကို အဆက်မပြတ် ဆက်တိုက် တရစပ် သိမှန်းသိနေတဲ့ အသိ။ အာရုံရော၊ အာရုံကို သိနေတဲ့ အသိရော နှစ်ခုလုံးကို သိနေတဲ့ သိမှတ်မှုရော အကုန်လုံး မရှိတော့တာကို သိရုံလေးသိနေတဲ့ အသိတွေ အဆက်မပြတ် ဖြစ်နေရမယ်။ အသိမပြတ်အောင် သတိရှိနေတာတွေ ဆက်တိုက် ဖြစ်နေရမယ်။ အဲဒီ အသိ သတိရဲ့ အနေအထားအရှိန်ဟာ မီးကုန်ယမ်းကုန် ထောင့်စေ့နေတဲ့ စိတ်။
- မီးစာကုန်ရင် မီးငြိမ်းပြီ။ ဆီခန်းရင် မီးငြိမ်းပြီ။ မီးစာကုန် ဆီခန်းတာဟာ တစ်ဘ၀စာ မီးငြိမ်းသွားတာပဲ။ တစ်ဘ၀စာ မီးငြိမ်းတာထက် သံသရာတစ်ခုလုံးစာ မီးငြိမ်းချင်တယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ? မီးလောင်တယ်ဆိုတာ လောင်စာရှိလို့ မီးလောင်တာ။ စိတ်ထဲမှာ ဒုက္ခမီးတွေ လောင်နေတာဟာ ခံစားမှုလောင်စာတွေ၊ လိုချင်တပ်မက်တဲ့ လောင်စာတွေ၊ စွဲလမ်းငြိတွယ်တဲ့ လောင်စာတွေ ရှိခဲ့လို့သာ သံသရာထဲမှာ ဘ၀တွေဆက်ပြီး ဒုက္ခမီးတွေ လောင်နေတာပဲ။ ခံစားမှုလောင်စာတွေ ဘ၀သစ်တစ်ဖန် ပြန်ဖြစ်စေတဲ့ တဏှာလောင်စာတွေကို ငြှိမ်းသတ်နိုင်ရင်. . . . .
- မျှော်လင့်ထားသလို မဖြစ်တော့တဲ့ ပြဿနာတစ်ခုခု ရုတ်တရက်ကြုံပြီဆိုတာနဲ့ လိုက်လျောညီထွေ အသုံးတည့်မယ့် အစီအစဉ်ကို ချက်ချင်း ထုတ်သုံးပြီး အခြေအနေအရ အဆင်ပြေအောင် စီစဉ်လိုက်နိုင်တဲ့ စိတ်အရည်အချင်း။
- ပြည့်စုံချမ်းသာ တိုးတက်အောင်မြင်တာကို မြင်ရ၊ ကြားရရင် ၀မ်းမြောက်တဲ့စိတ်။